App Store u Android
Waxaa xaqiiqo ah si fiican u yaqaan in user kasta Android ayaa heli kara Google Play Store. In badan oo xaaladood, Google Play Store APP waxaa mar hore lagu rakibay qalabka brand-cusub.
Google Store ayaa qaybo badan ee Chine iyo waa dareen leh, maxaa yeelay, waxaad ka arki kartaa oo dhan barnaamijyadooda aad ku rakiban (pre - rakibay la nidaamka qalliinka oo lagu rakibay ay adiga kuu gaar ah). Haddii ay jiraan updates aad app ama daadiyo, la keeneen in doonaa inaad iyaga soo bixi. Haddii ay sidaa tahay aadan haysan Play Store app Google ka, marka aad isku daydo in ay soo bixi app gaar ah, waxaa suuragal ah in lagugu duwo shabakadda internet-ka si ay ugu horeysay soo bixi app this. Ka dib Google kaydi waxaa lagu rakibay qalab Android aad, aad si toos ah uga Store ama ka website kasta oo uu leeyahay widget tani gundhig app kasta oo kala soo bixi kartaa.
Description: Waxaa jira saddex qaybood oo kale Apps, Music, Books. Waxa ay u muuqataa in Games Apps ah kuwa ugu soo bixi, oo lacag la'aan ah oo la bixiyey. Marka aad soo booqato Google Store, bilowgiiba laguu yeedho in ay soo booqdaan codsiyada ciyaaraha ugu danbeeyay, in kasta oo aad ka heli karto heeso music wanaagsan badan iyo buugaagta.
Faa'iidooyinka aad ka heli kartaa nooc kasta oo Chine
Qasaarooyinka ma aad kala soo bixi kartaa app ah, haddii aadan Google Play Store rakibay
Sida caan, inta badan isticmaala Android waa in ay leeyihiin app tan iyo tan sameeyo app ee aad loo jecel yahay. Heerka Ammaanka waa mid aad u sarreeya iyo app kasta oo soo bandhigay in Store waxaa si aad u wanaagsan loo xaqiijin. Waxaa degan booska hore.
The Amazon App Store aan la pre - rakibay qalabka Android in inta badan xaaladaha. Laakiin waxaad kala soo bixi kartaa lacag la'aan ah iyo u isticmaal sida user joogto ah. Ka dib markii aad soo bixi, si loo soo dajiyo on qalab aad, aad u baahan tahay si ay u tagaan goobaha of qalab aad iyo calaamadee sanduuqa Lama yaqaan Ilo. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay in ay email Amazon ah si ay u isticmaalaan.
Amazon App Store ayaa qaybaha badan oo aad kala dooran karto Games barnaamijyadooda, Chine gaar ah Kids, waayo, Entertainment, Majallado, Utilities. Sidoo kale, tani Store kor ku meel ugu horeysay ciyaaraha. Waxaa jira Chine oo lacag la'aan ah oo la bixiyey. Laakiin, waxa ay u muuqataa in ay yihiin yar barnaamijyadooda free badan ee Google Store. Si kastaba, qiimaha ee Chine yihiin laga bilaabo $ 0.99.
Faa'iido Visitors ka raadin kartaa fudud app ay u baahan yihiin
Qasaarooyinka Badanaa kaliya loo yaqaano users Amazon
Sida caan, waxaa loo isticmaalaa keliya isticmaalka Amazon. Xitaa waa dukaan weyn online; waxa ay u muuqataa in Amazon App Store ka yar used badan Google Play Store. Sababtan awgeed, waa in app publisher la wadaajin app la ammaanka profile ka hor gudbiyo Appstore Amazon. Sida Wacan ee suuqa app waxaa meel u dhaxaysa 3 iyo 4 waa.
Xilligan la joogo, AndroidPIT App loo isticmaalo dadka isticmaala android (si rasmi ah loo yaqaan AndroidPIT App Center). In la soo dhaafay, AndroidPIT App Center u dhiibay in ka badan 50 milyan oo downloads u barnaamijyadooda. Tan iyo 1 January 2015 users iyo app horumarinta isticmaali kartaa oo kaliya AndroidPIT App. App Tani lagala soo bixi karaa Google Play Store.
App AndroidPIT waxay gaarsiisaa barnaamijyadooda, iyo sidoo kale dib u comments for iyo barnaamijyadooda. Mid ka mid ah muujinta ugu fiican waa wixii sida forum halkaas oo dadka isticmaala codsan kartaa ama boostada ay opinion.
Faa'iido Forum gundhig
Qasaarooyinka tiro yar oo Chine
App Tani waxaa inta badan loo isticmaalaa helo wararka ku saabsan barnaamijyadooda Android iyo qalabka Android. Waxa ugu fiican waa in aad akhriyi kartaa sharaxaad faahfaahsan oo dheeraad ah u app ah, haddii aad tahay nasiib oo halkaas waxaad ka heli kartaa. Dabcan app ee lagala soo bixi karaa Google Store.
Luqadda loo isticmaalo waa Jarmal iyo waa in aad leedahay fursad aad turjumaad si ay u fahmaan oo dhan muuqaalada weyn halkaas ka ah. Waxaa si fiican u lama yaqaan, laakiin xoog u app marketing.
Faa'iido articles Long iyo tilmaanta u Chine
Qasaarooyinka Aan si aad u wanaagsan loo yaqaan -
Ma la hadli kartaa oo ku saabsan qaar ka mid ah caan u ah app this. Laakiin suuqa gaar ah waxa ay noqon kartaa mid waxtar leh.
Sida magaca ku odhan, app tani waa pre - rakibay qalabka ugu Samsung. Waxay leedahay barnaamijyadooda sida Raadi aan qalab, WordPress, Pen Up, shidin u Samsung, Dhammaan Share. Iyadoo Samsung Link aad ku xidhan karto qalabka oo dhan.
Samsung Apps siiyaan fiican la WordPress iyo sifooyinka gaarka ah sida xira qalabka oo dhan, mobile, TV, printer kaydinta, waa mid aad muhiim u ah dadka isticmaala Samsung.
> Resource > Android > Top 5 App Store u Android Waxaad waa in ay ogaadaan